डक्टर्स आर्टिकल | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
सायद यस्ता घटना अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर वा नर्स जो कोहीलाई नौलो नलाग्ला । बिरामीको कुरुवाले चर्को स्वरमा कराउने वा गाली गर्ने घटना प्राय भइरहन्छन् अस्पतालतहरुमा । तर गालिको पनि हद हुन्छ, सीमा हुन्छ । बिनाअर्थ बिरामीको कुरुवाहरुबाट देखाइने रिसले गम्भीर अवस्था समेत सिर्जना गर्नसक्छ कुनैबेला । म काम गर्ने अस्पतालमा पनि गएको मंगलवार यस्तै एउटा घटना भयो जुन अनुभूतिलाई मैले लिपीबद्ध नगरी बस्न सकिनँ । ...
सुनिता तब झस्किइन् जब डाक्टरले भित्री बस्त्र खोल्न भने
दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा भोट हाल्ने हुटहुटी चल्न थालिसकेको थियो । कहिले घर जाउँला भन्ने बेचैनी छँदैथियो । अन्ततः म पनि भोट हाल्न गृहनगर दाङ्गको राप्ती गाउँपालिका पुगे । कार्यालयमा कामको चापका कारण लामो समय गाउँ बस्न नसक्ने भएकाले मतदान गरी भोलीपल्टै मैले काठमाण्डौको यात्रा तय गरें । ...
यस कारण बढ्दै छन् गर्भपतन गराउने नयाँँ पुस्ता
पछिल्लो समय अस्पतालमा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढ्न थालेको छ । तर, कतिपयले चिकित्सकको सल्लाहविनै विभिन्न खालका औषधिको सेवन गरी गर्भपतन गराउन खोज्दा ज्यानकै जोखिम पनि मोलिरहेका छन् । ...
ती किशोरीको मानसिक रोग त निको होला, तर बलात्कारी समाजको उपचार कसरी गर्ने?
नेपालमा मानसिक रोगीहरुको औषधोपचार र परामर्शका लागि हालसम्म विभिन्न ५२ जिल्लाको भ्रमण गर्ने मौका मिल्यो। जिल्लामा भ्रमण गर्दा सयौं मानसिक रोगीहरु भेटेँ। समाजमा मानसिक रोगको अवस्था भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै सल्किरहेको छ। ...
के हो स्क्रब टाइफस ? यस्ता छन् जोगिने तरिका
स्क्रब टाइफस मुसाबाट मानव शरीरमा सर्ने एक प्रकारको रोग हो । मुसामा हुने माइट नामक किर्नाको टोकाइबाट स्क्रब टाइफस लाग्ने गर्छ । हुन त स्क्रब टाइफस सरुवा रोग होइन । यो रोग संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको माइट नामक किर्नाले अर्को मान्छेलाई टोक्यो भने मात्र सर्न सक्छ । ...
बहिरोपनको समाधान, के हो कक्लियर इम्प्लान्ट?
विभिन्न आधुनिक प्रविधिमध्ये सुन्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुन्न सक्ने बनाउने संसारमा अत्याधिक प्रयोगमा आएको यन्त्र हो, कक्लियर इम्प्लान्ट। ...
मधुमेहबाट आँखा बचाउने यस्ता १० सूत्र
नेपालमा लगभग पाँच लाख २७ हजार मानिसलाई मधुमेह रोग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह संगठनको अनुमान छ। ती मधुमेहका बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतमा कुनै न कुनै रुपमा आँखाको समस्या हुन्छ भने एक तिहाईमा आँखाको 'दृष्टि पर्दा' (रेटिना) मा असर पुगेको पाइन्छ। ...
कस्ता स्वास्थ्य समस्यामा कस्ता डाक्टरलाई भेट्ने?
बिरामीले सही उपचार पाउन सही डाक्टर भेट्नुपर्छ। जसका लागि बिरामीले आफ्नो रोगअनुसार विशेषज्ञ डाक्टर पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। रोगअनुसार सही डाक्टर पहिचान गर्न दुई वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। ...
हाई ब्लडप्रेसर बारे १८ भ्रम र सत्य, प्रेसरको बिरामीले अवश्य पढ्नुहोस
बढ्दो आधुनिकिकरणले जीवनशैली जति सहज बनाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा नयाँ समस्या पनि निम्त्याइरहेको पाइएको छ । सन्दर्भः हाई ब्लडप्रेसरको हो । ...
डाक्टर सुवोध अधिकारी राजधानी सहरको एउटा व्यस्त र सिद्धहस्त सर्जनको नाम हो । उनले झन्डै तीन दशक बिताइसके सर्जरीमा, त्यो पनि वीर अस्पतालजस्तो सधैँ बिरामीको भीडभाड रहने ठाउँमा । ...